चीनले पनि दिएन साथ, अब के गर्छ उत्तर कोरिया ? | Lifemandu
चीनले पनि दिएन साथ, अब के गर्छ उत्तर कोरिया ?
| सोमबार, २३ साउन, २०७४
एजेन्सी । विश्वशक्ति मानिने अमेरिकासँग दुश्मनी रहेको उत्तर कोरियालाई साथ दिँदैआएको अर्को शक्तिशाली राष्ट्र चीनले पनि अब साथ छोडेको छ ।
उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परिक्षणबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा यसअघि चीन र रुस उत्तर कोरियाको पक्षमा उभिँदैआएका थिए । पछिल्लो पटक भने यही विषयमा उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउन चीन पनि सहमत भएपछि उत्तर कोरिया एक्लिने खतरा बढेको छ ।
उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी लगाउने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रघीय सुरक्षा परिषदमा सर्वसम्मतिले पास भएको छ । यही कारण उत्तर कोरियाले कठिन अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । विज्ञहरुले यसलाई सबैभन्दा कडा नाकाबन्दीको रुपमा बुझेका छन् ।
यद्यपी उत्तर कोरियाले गत जुलाईमा दुई क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आफूसँग अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दावी गरेको थियो । उत्तर कोरियाको यस्तो दावीप्रति जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक सशंकित रहे पनि त्यसको बिरोध गरेका छन् ।
अन्ततः चीनले पनि उत्तर कोरियाको साथ नदिएको अवस्थालाई विज्ञहरुले उत्तर कोरियाको अहिलेसम्मकै कठिन अवस्थाका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
जब चीनले दियाे अमेरिकालार्इ यस्ताे चुनाैती, उत्तर काेरियाकाे खुसीकाे सिमा रहेन
एजेन्सी । अमेरिका र उत्तर कोरिया युद्धको संघारमा रहेका छन् । पछिल्लो मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिका र दक्षिण कोरिया मिलेर उत्तर कोरियामा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
उत्तर कोरिया–अमेरिकाबीच गोप्य कुराकानी ???
बिबिसी । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव कायम छ । दुवै देशबीच आधिकारिक कुराकानी हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, अमेरिका र उत्तर कोरिया अनौपचारिक कुराकानी भने अझै पनि गरिरहेका छन् ।
किन बदलियो नाटकीय रूपमा उत्तर कोरिया ?
एजेन्सी । पछिल्लो दुई वर्षमा पहिलो पटक भएको उच्च स्तरीय बैठकमा उत्तर कोरिया सीमा क्षेत्रको तनाव कम गर्न सैन्यवार्ता मार्फत सहमतिका लागि तयार भएको छ ।